Fanafihana an'i Arabia Saodita: Fanambarana momba ny olana amerikana
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Fanafihana an'i Arabia Saodita: Fanambarana momba ny olana amerikana
Melohin'i Etazonia mafy ny fanafihana farany natao tany Riyadh, Saudi Arabia. Hoy ny Departemantam-panjakana tamin'ny fanambarana an-gazety: “Manangona vaovao misimisy kokoa izahay, saingy toa fikasana hitarika sivily no kendrena. Ny fanafihana toy izany dia mandika ny lalàna iraisam-pirenena ary manimba ny ezaka rehetra hampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana. Rehefa miasa izahay mba hampihena ny fifanenjanana ao amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny diplaomasia mifehy ny foto-kevitra, anisan'izany ny famaranana ny ady any Yemen, dia hanampy ny mpiara-miasa amin'i Arabia Saodita hiaro amin'ny fanafihana ny faritaniny ihany koa izahay ary hitazona ireo izay manandrana manimba ny fitoniana. . ”
Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena King Khaled ao Riyadh dia nilaza fa misy fahatarana sidina maromaro, saingy tsy fantatra mazava raha nifandray tamin'ny zava-nitranga ny sabotsy izy ireo.
Saudi Arabia Saodita dia nanakana ny fanafihana balafomanga na fanafihana fiaramanidina miharihary an'i Riyadh tamin'ny sabotsy, hoy ny haino aman-jerim-panjakana tao amin'ny fanjakana, izay nisy fanafihana miverimberina nataon'ny mpikomy Houthi Yemen hatramin'ny 2015.
Ireo mpampiasa media sosialy dia nandefa horonantsary momba ny toa fipoahana teny amin'ny habakabaka tao Riyadh. Tokony ho tamin'ny 11 ora antoandro dia niseho ny tranga (08:00 GMT).
Ny fiaraha-mitantana notarihin'i Arabia Saodita, izay manohana ny governemanta ekena iraisam-pirenena an'i Yemen manohitra ny Houthis, dia nilaza fa “nisaboka sy nanimba ny tanjon'ny rivotra feno fankahalana mankamin'ny Riyadh”, nefa tsy namelabelatra, araka ny filazan'ny fahitalavi-panjakana Al Ekhbariya.
Ajanony ny tsy fandehanan'ny tany any Boeing 737 Max any Eropa
Ny saron-tava azo antoka indrindra hanaovana akanjo dia mampivadi-po ny Amerikanina